Sidee loo aqoonsadaa ereyada ugu muhiimsan iibinta ee liiska Amazon?
Waa wax maskaxda ah oo loogu talagalay soo iibsi wax ku ool ah oo kasta oo iibiyaha u baahan yahay inuu lahaado liiska saxda ah ee iibinta ereyada muhiimka ah ee liiska Amazon. Marka la qiimeeyo habka saxda ah, ereyada raadinta ah ee si sax ah loo bartilmaameedsanayo iyo kalmadaha kalmadaha ayaa kaa caawin kara dalabyadaada inay u muuqdaan kuwo horay u ah iibsadahaaga iman kara iyagoo isticmaalaya weedho fog oo la xiriira si ay u ogaadaan waxa ay u baahan yihiin. Taasi waa sababta kaliya ee suurtogalka ah ee lagu xallin karo khasaarihii ganacsiga ee dakhli soo-gaadhsiin ah in la helo badeecadaada lagu soo bandhigay iibka iyadoo badanaa la baaray oo sidaas darteedna aad u qiimo badan oo suurtagal ah. Laakiin ma jiraan habab caalami ah oo loo isticmaalo ereyada muhiimka ah ee liiska loo yaqaan 'Amazon' liiska? Waa hagaag, aynu aragno.
Qalabka ugu Caansan ee Nidaamyada ee Amazon Listings
Ka hor inta wax kale, aynu soo horjeeda - makiinada raadiyaha waaweyn (sida Google laftiisa) ayaa badanaa eegaya celceliska wakhtiga booqasho kasta, iyo sidoo kale cabbirada qiimo-hoose-u-qaadashada si ay u qaataan go'aan macquul ah oo ku saabsan bixinta booska shakhsi ahaaneed ee bog kasta oo laga helo bogga internetka dhexdiisa. Isla mar ahaantaa, si kastaba ha ahaatee, alaabooyinka Amazon 'search for algorithm' waxay u socotaa hal wareeg oo si xoog leh loo iibiyo - qiyaasta isbeddelka muujinaya sida wanaagsan (ama aan u ahayn) kuwa martida ah waxaa laga beddelaa macaamiishaada mustaqbalka ee iibsadaha dhabta ah. Waxay ka dhigan tahay horumarkaaga ugu dambeeyey ee aad iibisay iyo tirada dib u eegista dukaamada wanaagsan ayaa sidoo kale lagu xisaabtamayaa A9 algorithm sida arrimo aad u xoogan.
Ku bilow Bilowga Cilmi-baarista Loogu Talagalay Xeelad
Sidee, sida loo guuleysto helitaanka badeecooyinka heerarka dabiiciga ah ee Amazon ee SERPs laga bilaabo bilawga ah? Waxaan aaminsanahay in qof kasta oo iibiya halkaa (iyo ganacsatada yar yar ee ganacsatada ah, gaar ahaan) inay bilaabaan inay samaystaan ​​liisaskooda wax soo saarka ee raaxo leh si ay u aqoonsadaan A9 sida tayada tayada, dhab ahaantii qiimahoodu muujinayaan tiro sii kordhaysa ee macaamiisha ah ee iibsashada internetka la Amazon. Oo halkan waa waxa kaa caawin kara wax badan. Tixgeli liistada soo socota ee hoos ku qoran oo leh khadad fudud oo talo iyo talooyin ah si aad u leexatid bartilmaameedyada saxda ah ee liisaskaaga Amazon - oo ah dadaal siman oo si buuxda loo xakamayn karo.
Isku Diyaarin Liiskaaga Hore ee Macnaha Furaha ee Amazon Listings
Isku day inaad ka fikirto dibadda sanduuqa. Xusuusnow, hab kasta oo ay bartilmaameedyadu bartilmaameed u tahay inay raadiyaan waxyaabaha aad ku iibineyso - waxay noqon kartaa inaad noqotid noqoshada ugu dambeysa ee aad ku guulaysato ama raadinta waqti dheer.
Ha ka waaban inaad laba jeer eegto labo jeer si aad u hesho qaar kale oo isku mid ah oo isku mid ah, iyo sidoo kale LSI keywords oo ku xiran alaabtaada ama sheygaaga.
U hubso inaad tixgeliso mugga raadinta ee lagu qiyaasi karo erey kasta oo muhiim ah kahor inta lagu darin liiskaaga ugu muhiimsan ee aad ku guuleysan kartid. Waxaan kugula talineynaa isticmaalka qalabka muhiimka ah sida Ereyada Ganacsiga ama Kormeeraha Keyword si uu kaaga caawiyo helitaanka qiyaasta celceliska ee mitirkaas.
Maskaxda ku hay in mararka qaarkood runtii fulinta isku-darka wax-raadinta waxaa laga helaa xataa xitaa ereyada maqan, ikhtiyaaro kala duwan oo ah noocyo kali ah / jamac ah, iyo sidoo kale sameynta kala duwanaanta ereyada muhiimka ah ee ku lug leh isla mowduuc Source .